Ungayakha kanjani inethiwekhi yakho ye-WiFi Mesh ekhaya | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | | Ukuzenzakalela kwasekhaya, Ikhaya
Amanethiwekhi I-WiFi Mesh Ziba ubuchwepheshe obudume kakhulu eminyakeni yamuva, ikakhulukazi manje njengoba sesinamadivayisi amaningi aya exhunywe kuma-light bulbs, ama-consoles womdlalo, amakhompyutha nakho konke okunye okuvelayo. Ngakho-ke, ukuba ne-WiFi yesimanje kuya ngokuya kubaluleke.
KwiGajethi yangempela Sine-Devolo Mesh WiFi 2 entsha futhi sizokukhombisa ukuthi ungayifaka kanjani kalula inethiwekhi yakho ye-Mesh WiFi ekhaya. Thola nathi ukuthi ungakwenza kanjani nokuthi iyiphi ikhithi yokufaka ehamba phambili ezokwenza impilo yakho ibe lula ukuzulazula nokudlala ngejubane eliphezulu.
Njengakwezinye izikhathi, Sinqume ukuhambisana nalesi sifundo nevidiyo ozoyithola phezulu, Kuyo uzokwazi ukubona igxathu negxathu ukuthi yiziphi zonke izici nokusebenza esizokufeza futhi ngokungangabazeki kuzoba lula kakhulu kuwe ukukwenza.
Kodwa-ke, ungasisiza ukuthi siqhubeke nokukhula uma usishiyela iLike bese ubhalisela isiteshi sethu. Kumele kuqashelwe nokuthi ukufeza lesi sifundo sibe nokusebenzisana kukaDevolo, brand ekhethekile e-PLC nezinye izixazululo zokwenza ngcono ukuxhumana emakhaya ethu.
1 Yini inethiwekhi ye-WiFi Mesh?
2 Inketho: I-Devolo Mesh WiFi 2 Multiroom Kit
3 Ungayifaka kanjani inethiwekhi ye-WiFi Mesh ekhaya
4 Uhlelo lokusebenza lwe-Devolo, inani elingeziwe
Yini inethiwekhi ye-WiFi Mesh?
Ake siqale sikucacise ukuthi iyini inethiwekhi ye-Mesh WiFi nokuthi yiziphi izinzuzo zayo eziqhathaniswa nokuphindaphinda kwendabuko kwe-WiFi. FUTHIOkokuqala, inethiwekhi ye-WiFi Mesh idala inethiwekhi eyenziwe ngesiteshi sesisekelo kanye nochungechunge lwama-satellite noma amaphuzu okufinyelela axhumana nomunye ukunikela ngenethiwekhi eyodwa ye-WiFi. leyo mininingwane yokwabelana ngokuxhumana njengephasiwedi noma ukuhlonza. Njengokuthi, isibonelo, ama-antenna ocingo asebenza ngokwethiyori. Lokhu kuthuthukisa kakhulu izici eziningi zokuxhuma.
Ngale ndlela, inethiwekhi iqondisa njalo ithrafikhi ngendlela ehlakaniphe kakhulu futhi efanelekile yomsebenzisi, ikhomba idivaysi ngayinye futhi inikeze indlela esheshayo nehlanzekile yokudlulisa imininingwane. Ngale ndlela idlulela ngalé kohlelo olulula lweziphindaphindo ze-WiFi ezenza ukuthi idivayisi ixhumeke kuphela kulowo osondelene nayo ngaphandle kwesidingo sokuphenya ngokujulile ukunikela ngensizakalo esheshayo nekhwalithi. Kule ndaba, uDevolo uchwepheshe impela, enikeza ngokubona kwami ​​ama-PLC amahle kakhulu emakethe isikhathi eside, bekungeke kube kuncane ngobuchwepheshe beMesh.
Inketho: I-Devolo Mesh WiFi 2 Multiroom Kit
Kulokhu sibe nokusebenzisana okudingekayo ukusetha inethiwekhi yethu ye-WiFi Mesh ekhaya. Ikhithi yeDevolo inesiteshi sesisekelo neziphuphutheki ezimbili lokho izosivumela ukumboza indawo ebanzi futhi kuze kufike kumadivayisi ayi-100 kusethelayithi ngalinye, Ngakho-ke singaphatha kuze kufike kumadivayisi we-300 endlini yethu futhi ngombono ngeke silahlekelwe ikhwalithi yokuxhumana.
Njengoba bekulindelwe, idivayisi ye-Devolo inokuxhumana kweGigabit kanjalo Singakhetha phakathi kwe-2,4 GHz ne-5 GHz WiFi Ngokuya ngezidingo zethu, empeleni, uma sifuna singaba nawo womabili amanethiwekhi ngasikhathi sinye, khumbula ukuthi kukhona amadivayisi angahambelani namanethiwekhi we-5 GHz.
Noma kunjalo, kufanele sikukhumbule lokho IDevolo iphinde inikeze iSterter Kit ukuthi esikhundleni samadivayisi amathathu inamadivayisi amabili ngentengo eshibhile, yize ngincoma ukubheja kunguqulo enwetshiwe.
Nokho, ungayikhulisa noma kunini lapho ufuna khona, Kuzomelwe uthenge amanye amayunithi we-Devolo Mesh ozowathola ezindaweni ezahlukene zokuthengisa. Futhi njengoba manje usuyazi ukuthi iyiphi idivayisi esizoyisebenzisa, sizokukhombisa ukuthi siyisebenzisa kanjani.
Ungayifaka kanjani inethiwekhi ye-WiFi Mesh ekhaya
Okokuqala sizocabangela imininingwane, kufanele ubheke ipulagi yamahhala noma ipulagi efanayo lapho i-router yakho ixhumeke khona. Asincomi ukuxhuma isisekelo se-Devolo entanjeni yamandla noma intambo yokwelulwa, ngoba lokhu kungadala ukuphazamiseka kwezinye izimo ezithinta ikhwalithi yokuxhuma. Ngaphakathi kwemiyalo ye-Devolo Kit uzothola lezi zinkomba. Manje mane uxhume i-PLC yakho ngqo kunethiwekhi kagesi bese usebenzisa ngokunenzuzo ipulagi ikithi elikunikeza lona uqobo.
Manje sizoqhubeka nemiyalo elula:
Xhuma ikhebuli ye-RJ45 Ethernet efakiwe kwelinye lamachweba we-Devolo Kit
Manje xhuma omunye umkhawulo ngqo ethekwini le-Ethernet yomzila wakho
Uzobona ukuthi i-WiFi Kit ikhanya ibomvu, yishiye okwamanje
Iya kwamanye amaphuzu lapho ufuna ukubeka khona amanye ama-satellites e-WiFi Mesh, uwahlukanise ngokuhlakanipha
Ixhume uzobona ukuthi ama-LED amabili abomvu nawo ayacwayiza
Ngemuva kwemizuzu embalwa wonke amadivayisi azokhanya amhlophe futhi lokhu kusho ukuthi usuvele ukugcwalisile ukufakwa
Njengoba ukwazile ukuzibheka, Kuyi-Plug & Play empeleni futhi izosebenza yodwa, Kepha uDevolo une "ace up sleeve" yakhe esefomini yohlelo lokusebenza.
Uhlelo lokusebenza lwe-Devolo, inani elingeziwe
Yize kungadingekile, sinesicelo se-Devolo esihambisana ne-Android ne-iOS esizosivumela ukuthi senze ngokwezifiso inethiwekhi yethu ye-WiFi Mesh.
Landa okwe-iPhone ne-iPad
Uhlelo lokusebenza luhle impela ngoba singakwazi ukwenza ngezifiso i- Inethiwekhi ye-WiFi Mesh ngoba singashintsha igama, phatha amadivayisi futhi wenze kusebenze / usebenze ibhendi esisebenza kuyo ngentando yethu.
Kumele sibheke ukuthi lawa madivayisi we-Devolo awashibhile, kepha iqiniso ukuthi ngemuva kokuzama iningi lalawa madivayisi sifinyelele esiphethweni sokuthi kungcono ukubheja kumikhiqizo eyaziwayo. IDevolo inolwazi olunzulu njengoba imikhiqizo yayo yakhelwe eGermany. Phambilini sihlaziye abaningi babo lapha e-Actualidad Gadget futhi bahlala bathola ukwaneliseka okuphezulu phakathi kwabahlaziyi.
Thenga iDevolo ngentengo engcono
Sincoma ukuthi ubheje ngokuthembela kukaDevolo nokuthi uma unemibuzo, iya ebhokisini lokuphawula esiteshini sethu se-YouTube.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ukuzenzakalela kwasekhaya » Ungayakha kanjani inethiwekhi yakho ye-WiFi Mesh ekhaya